Amosa 7 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
7 Ary izao no fahitana nasehon’i Jehovah Tompo Fara Tampony tamiko: Nampisy andiam-balala izy raha vao nanomboka niakatra ny vokatra avy tamin’ny famafazana faharoa,+ dia ilay famafazana taorian’ny fakana ny vilona takin’ny mpanjaka. 2 Ary rehefa lanin’ny valala ny zavamaniry teo amin’ilay tany, dia hoy aho: “Ry Jehovah Tompo Fara Tampony ô, mba avelao re ny helony e!+ Iza intsony no hahatsangana avy amin’i Jakoba? Fa kely ange izy e!”+ 3 Dia nanenina ny amin’izany i Jehovah,+ ka hoy i Jehovah: “Tsy hitranga izany.” 4 Ary izao koa no fahitana nasehon’i Jehovah Tompo Fara Tampony tamiko: Nampiasa afo mba hiadiana i Jehovah Tompo Fara Tampony,+ ka ritra ny rano lalina midadasika ary levona ny sombin-tany. 5 Koa hoy aho: “Ry Jehovah Tompo Fara Tampony ô, mba atsaharo re e!+ Iza intsony no hahatsangana avy amin’i Jakoba? Fa kely ange izy e!”+ 6 Dia nanenina ny amin’izany i Jehovah,+ ka hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony: “Tsy hitranga koa izany.” 7 Ary izao no fahitana nasehony tamiko: Teo ambony manda izay efa nampiasana pilao+ i Jehovah, ary nisy pilao teny an-tanany. 8 Dia hoy i Jehovah tamiko: “Inona no hitanao, ry Amosa?” Ary hoy aho: “Pilao.” Dia hoy koa i Jehovah: “Hampiasa pilao eo amin’ny Israely oloko aho,+ ka tsy holeferiko intsony ny fahadisoany.+ 9 Ho lasa aolo ireo toerana avon’i Isaka,+ ary horavana+ ireo toerana masin’Israely.+ Dia hitsangana aho, ka hamely ny taranak’i Jeroboama amin’ny sabatra.”+ 10 Ary naniraka olona tany amin’i Jeroboama+ mpanjakan’ny Israely i Amazia, izay mpisorona tao Betela,+ ka nanao hoe: “Eto anivon’ny taranak’Israely eto mihitsy i Amosa no manao teti-dratsy hanohitra anao.+ Ary tsy zakan’ny olona eto ny teny rehetra nolazainy.+ 11 Fa izao no nolazain’i Amosa: ‘Ho fatin-tsabatra i Jeroboama, ary ny Israely kosa tsy maintsy hatao sesitany, ka hiala amin’ny taniny.’”+ 12 Ary hoy i Amazia tamin’i Amosa: “Andeha mandeha any, ry mpahita,+ ka mandosira any Joda, dia mihinàna hanina any, ary any ianao no mahazo maminany. 13 Fa aza maminany eto Betela intsony,+ satria toerana masin’ny mpanjaka eto,+ sady renivohi-panjakana.” 14 Dia hoy ny navalin’i Amosa an’i Amazia: “Sady tsy mpaminany aho no tsy zanaka mpaminany,+ fa mpiandry ondry+ sady mpanindrona aviavidia. 15 Ary nalain’i Jehovah teny am-piandrasana ondry aho, ka hoy i Jehovah tamiko: ‘Mandehana maminany amin’ny Israely oloko.’+ 16 Koa henoy àry ny tenin’i Jehovah: ‘Ianao mantsy niteny hoe: “Aza milaza faminaniana mamely ny Israely,+ ary aza miteny+ hanohitra ny taranak’i Isaka na indraim-bava aza.” 17 Koa izao no nolazain’i Jehovah: “Ny vadinao ho lasa mpivaro-tena ao an-tanàna,+ ary ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ho lavon-tsabatra. Ny taninao kosa hozarazaraina amin’ny alalan’ny tady fandrefesana. Ianao ho faty eo amin’ny tany maloto,+ ary ny Israely kosa tsy maintsy hatao sesitany, ka hiala amin’ny taniny.”’”+